छोराको हत्या, न्यायकालागि भौतारीदै आमा – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ श्रावण ४ गते शुक्रबार ०९:५१ मा प्रकाशित
सन्तान गुमाउँदाको पीडा बुवाआमालाई जतिको अरु कसलाई पर्ला । नौ महिना कोखमा राखी २५ वर्षसम्म आफ्नो आँखा अगाडी हुर्काएको छोरो गुमाउनु पर्दा पीडाको सिमा रहँदैन । अझै छोरालाई कुटिकुटि मारेको भनेपछि विष्णुकुमारी पाण्डेको मन मात्र टुटेन, तीन वर्षदेखी आँखा ओभाएको छैन उनको ।
छोरालाई कुटेर मार्ने ५–६ जना अहिलेसम्म खुल्लेआम हिँडेको भन्दै विष्णुले ‘न्याय हराएको पोखरा’ भन्दै हिँडेकी छन् । पटक–पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की धाउँदा पनि छोराको घटना टुङ्गो नलागेपछि विष्णुसँग रुँदै मानवअधिकारवादी संघ संस्था र मिडिया गुहार्ने बाहेक अरु कुनै विकल्प रहेन ।
घटना २०७२ साल फागुन ५ गतेको हो । मादी सिल्दुजुरे घर भएका विष्णु र उनका छोरा सूर्य पोखरा नयाँबजार बस्थे । फागुन ५ गते शिवरात्री परेको थियो । मोटरसाइकल वर्कशपमा मिस्त्री रहेका सूर्य त्यस दिन विदा भएकै हुनाले अन्य युवाहरु जस्तै साथीहरु शिवरात्री मनाउन घरबाट हिँडे ।
आमा विष्णुसँग विदा मागेर गएको छोरा भोली पल्ट फर्किएन । त्यस दिन विहान एउटा सूचना आयो ‘एक जना केटाको लास सेती नदी किनारमा भेटिएको छ’ । त्यो खबरले विष्णुको मनमा चिसो पस्यो । खबर कानमा पर्नसाथ सबै सेती किनार तर्फ लागे । नयाँ बजार राम मन्दिर पछाडि सेती नदी पुलमुनि सूर्यको लास थियो ।
भोलीपल्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सूर्यको परिवारले किटानी जाहेरी पनि दिए । केही युवाहरुलाई सोधपुछको लागि बोलाइयो तर घटना बारे केही थाहा भएन । सूर्यको चिउडोमा गहिरो चोट लागेका थियो । शरिरको अन्य भागमा पनि चोट थियो । शव फेला परेको ठाँउबाट नजिकै अस्थायी प्रहरी बिट हुँदा पनि प्रहरी अनविज्ञ भएपछि अझै शंका उब्जेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका तत्कालिन प्रवक्ता तथा डिएसपी केदार रजौरेले घटना बारे गहिरो अनुसन्धान थाले तर टुङगो भने लागेन ।
अहिले ३ वर्ष वितिसक्दा पनि प्रहरीले घटनाबारे सत्य पत्ता लगाउन सकेको छैन, न त त्यो केसको फाइल नै बन्द गर्न सकेको छ ।
३ वर्ष पुरानो घटना रहेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । ‘त्यो घटना हुँदा म कास्कीमा थिइनँ ,’ उनले भने, ‘घटना सुन्दा हत्या भएको भन्ने आएको छ तर कसले ग¥यो भन्ने अझै पत्ता लागेको छैन ।’
घटना रहस्यमय नै बनेको अधिकृतले बताए । ‘हुन त त्यो बेला पोष्टमार्टम रिपोर्टमा ( कज अफ डेथ) मृत्यु हुनुको कारण बजारिएर भएको छ,’ उनले भने, ‘परिवारले पनि केही युवाहरुले कुटेर सेतीमा फालिदिएको भनेर आरोप लगाएका थिए ।’
मेरो छोरालाई शिवरात्रीको वेलुका केही केटाहरुले कुटपिट गरेका थिए । मैले अहिले पनि तिनीहरुको नाम भुलेको छैन । त्यति मात्र होइन त्यो वेला मेरो छोराको केस हेर्र्ने प्रत्येक प्रहरीको नाम पनि मलाई याद छ ।
कसैले पत्ताउँदैन होला । म न्यायको लागि ३ वर्षदेखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, मानवअधिकार वादी संघ संस्था, वकिलकहाँ धाएको छु । तर मेरो मर्म सुन्ने मात्र भए, निकास गरिदिने कोही भएनन् । सबै ठाँउबाट सान्त्वना मात्र दिए, न्यायको पहल गरिदिने कोही भएनन् ।
मेरो छोरालाई मार्ने हत्यारालाई कारवाही नभएपछि म न्यायको लागि भौतारिएको छु । म मर्न भन्दा पहिला मेरो छोराको हत्यारालाई कारागारमा देख्ने धोको छ ।
आमा विष्णुकुमारी पाण्डे
प्रहरीकहाँ जाँदा मेरो छोरा आफै खसेर मरेको भन्छन् । त्यस्तो कुरा सुन्दा झन् पीडा लाग्छ । कोही मान्छे आफै हाम फाल्छ ? घटना भएको राती मेरो छोरालाई कुटेको देख्ने मान्छेहरु पनि छन् । उनीहरु त्यो वेलामा पनि बोलेका थिए र अहिले पनि बोल्न तयार छन् । हुँदा हुँदै अहिले त जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको गेटबाटै फर्काइदिन्छन् मलाई ।
यो बुढि कति किचकिच गर्न आउँछे भन्दै हेप्छन् । मैले नयाँ एसपी सावलाई भेटेर आफ्नो गुनासो गर्न पनि नपाउने कस्तो प्रहरी कार्यालय हो ? एसपी सावलाई भेटर म फेरी किटानी जाहेरी दिने पक्षमा छु । मलाई थाहा छ, मेरो छोरा फर्किदैन भनेर तर मेरो छोराको हत्यारालाई जेल हाल्न पाए त्यही हो मेरो जीन्दगीमा ठूलो कुरा ।
हत्या भए कारवाही हुन्छ : एसपी राना
पुरानो घटना भएको हुनाले मैले पनि बुझ्नै पर्छ । जहाँसम्म हत्या जोडिएको छ भने ढिलो हुन नपर्ने हो । बल्ल घटनाबारे थाहा पाएँ । पिडित पक्षलाई बोलाएर म सोधपुछ अघि बढाउँछु । घटनाको बारेमा बुझ्छु अनि अनुसन्धान थाल्छु ।
यदी हत्या भएको हो भने कानुनी दायरामा ल्याइन्छ । हत्या भएको होइन भने केसले किन निकास पाएन । यसको लागि फाइल पल्टाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतले भन्योः नेपाल आफ्नो समस्या समाधानका लागि आफै सक्षम छ
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पोखरामा, ‘नेपाल–बंगलादेश पर्यटन प्रवद्र्धन एन्ड बी टू बी…